2017 Ny Fiofanana Lohataona Oakland A
Oakland Athletics ao amin'ny kianja Hohokam - Spring Training 2017
Baseball Training Training amin'ny Oakland A's
Ny Oakland Athletics dia milalao baolina fandaka amin'ny lohataona ao amin'ny kianjan'i Hohokam renivohitra any Mesa. Ity dia toerana vaovao ho an'ny ekipa hatramin'ny 2015, miala eto avy ao amin'ny kianjan'i Phoenix Municipal.
Hohokam Stadium Adiresy
1235 N. Centre Street
Hohokam Stadium Phone
Ahoana no hahatongavako any amin'ny kianja Hohokam?
Ity misy sarintany mampiseho ny kianja Hohokam. Ity kianja ity dia tsy azo hidirana amin'ny Valley Metro Light Rail, raha tsy tianao ny mandeha an-tongotra lavitra; Mirefy roa kilaometatra avy eo amin'ny foiben'ny Centre / Main.
Inona ny fandaharam-potoana ho an'ny lalao Training Training Spring 2013?
Ny fandaharam-potoan'ny fanofanana atleta amin'ny atletika amin'ny vanim-potoana 2016 dia aseho etsy ambany. Tsindrio ity pejy ity mba hahazoana tsipiriany momba ny fividianana tapakila.
Ny lalao rehetra dia manomboka amin'ny 1:05 pm na 1:10 pm Arizona ora raha tsy misy ny filazana.
Ireo lalao ireo dia hotazaina ao amin'ny kianjan'i Hohokam raha tsy misy fanamarihana manokana.
Ity fandaharam-potoana ity dia tsy ahitana lalao izay nilalao ivelan'i Arizona.
Oakland A ny fiantombohan'ny fandaharam-potoana Fandaharam-potoana sy ny fotoana voatonona dia mety miova tsy ampoizina. Hatramin'ny vanim-potoanan'ny lalao dia afaka miova mandra-pahavitan'ny fandaharam-potoana, jereo ny lalao andro alohan'ny hividiananao tapakila. Ity fandaharam-potoana ity dia misedra mandrapahatongan'ny tapakila amin'ny fifaninanana Athletics Spring Training mivarotra .
Cactus League 2017: Lalao fandaharam-potoana ao amin'ny Oakland Athletics
Ireo no lalao fampiofanana amin'ny lohataona izay horaisina ao amin'ny kianjan'i Hohokam. Raha te hahita ny fandaharam-pampianarana Cactus League amin'ny Spring, dia jereo ny pejin-dohatenin'ny volana amin'ny fahitana .
Hohavaozina izy rehefa hambara sy farany ny fizotran'ny tarika rehetra.
Alahady 26 Febroary vs Angels
Talata 28 febroary vs. Indianina
Alakamisy 2 Martsa vs. Rangers
Zoma 3 martsa vs. Giants
Asabotsy 4 Martsa vs. Indianina
Alarobia 8 Martsa vs Italia WBC
Alakamisy 9 Marsa vs Reds
Asabotsy 11 Martsa vs. Rangers
Alahady 12 Martsa vs Cubs
Talata, 14 Martsa vs. Rockies
Zoma 17 Martsa vs. Diamondbacks
Asabotsy 18 Martsa vs Padres
Alatsinainy 20 Martsa vs Diamondbacks amin'ny 7:05 hariva
Alakamisy 23 Martsa vs. Brewers
Zoma 24 Martsa vs White Sox
Asabotsy 25 Martsa vs Reds
Alatsinainy 27 Marsa vs Royals
Ahoana no hividianako tapakila?
Tsidiho eto mba hahalalanao ny tapakila amin'ny tapakila amin'ny fifaninanana Athletics Spring . Afaka mividy tapakila ianao:
Amin'ny finday amin'ny Ticket.com amin'ny 877-493-2255.
Olona ao amin'ny Office Box Office Stadium.
Raha toa izy ireo dia mivarotra, avy amin'ny mpividy tapakila malaza toy ny TicketNow.com.
Raha toa ka amidy izy ireo, avy amin'ny fifanakalozana scalpers / tapakila . Fanamarihana: mitandrema amin'ny tapakila sandoka!
Jereo ny Diarin'ny sehatry ny kianjan'i Hohokam
Manana sary ve ianao?
Manomboka eto mba hahita ny sarin'ny kianja Hohokam. Ireo sary ireo dia avy amin'ny kianja taloha. Rehefa manomboka ny fotoam-pisakafoanana, dia hosoloiko ireo sary vaovao avy amin'ny baolina kanto navaozina.
Fampiofanana misimisy kokoa amin'ny lohataona >> Other Cactus League Teams
Get It All >> Ny Torolalana Manolotrana ho an'ny Fampiofanana ny Lohataona ao amin'ny Arizona / Cactus League
Ny toetr'andro tamin'ny Martsa tao Phoenix, Arizona
Raha nosamborina tao Phoenix ianao, dia izao no tokony ho fantatrao
Saripika Arabo soavaly Scottsdale - 2017
Manana traikefa momba ny spa amin'ny Luxury any Arizona
Mpilalao amin'ny Season Baseball Season 2017 Fall League
Fampandrosoana Business Travel and Spiritual Travel
Ny Faritr'i Finlande
Fireplaces ary ny Arizona Arizona
Ny Numbers Guy ao amin'ny Sportsbook Wynn Las Vegas
Ny tantara tany aloha tany Porto Rico
Tolo-kolontsaina ho an'ny asa any Angletera
Toerana tsara indrindra any amin'ny Washington, DC
Torolalana ho an'i Getaway avy any Sacramento
Fialamboly Campervan Rentals: Aoka Ianao Hifanaraka Amin'i Eoropa
Doheny State Beach Camping - Orange County, CA
Hetsi-panoherana 10 any Hong Kong Disneyland
Moa ve i Paris ho an'ny mpizaha tany rehefa misy fanafihana vao manomboka any Eoropa?
Manao dia an-tongotra eny an-tany
Instagram Tour: Palmetto Dunes Oceanfront Resort ao amin'ny Hilton Head